New Hampshire | JPMA, Inc
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်ကိုသုံးပြီး
ဤတွင်အသစ်ရဲ့ eWIC ကဒ်နှင့်အတူစျေးဝယ်တချို့လမ်းညွှန်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
eWIC ဖြင့်သင်၏အိမ်ထောင်စု၏ WIC သက်သာခွင့်များကိုသင်၏ WIC ရုံးရှိ WIC အကောင့် / eWIC ကဒ်တစ်ခုတွင်ထည့်လိမ့်မည်။ သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်ကာလအတွက်အစနှင့်အဆုံးနေ့စွဲဖြင့်သင်၏အစားအစာစာရင်းကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ သင်၏ NH eWIC ကဒ်ကိုသင် WH အစားအစာများကို NH WIC တရားဝင်စတိုးဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူလိမ့်မည်။
ယင်းရှာဖွေပါ နယူးဟမ်းရှား WIC ဤတွင်လက်ခံခဲ့သည် နိမိတ်လက္ခဏာ။
သင့်အိမ်ထောင်စုအကျိုးအတွက်ချိန်ခွင်လျှာကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ WIC အစားအစာများကိုရွေးချယ်ပါနှင့် နယူးဟမ်းရှား WIC အစားအသောက်စာရင်း Approved.
အကျိုးအတွက်လကာလအတွင်းလိုအပ်အဖြစ် WIC အစားအစာများကိုသာသင်လိုအပ်သော WIC ပစ္စည်းများဝယ်ဝယ်နိုင်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးသေးငယ်စတိုးဆိုင်မှာစျေးဝယ်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ WIC ပစ္စည်းများကိုခွဲခြားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ငွေရှင်းကောင်တာသည် WIC အစားအစာများကိုစစ်ဆေးသည်။ (မနိုင်သလား Self-ကုန်ပစ္စည်းလမ်းသွားအသုံးပြုပါ။ )
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ eWIC ကဒ်ပွတ်ဆွဲပါ။ အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်ငွေပေးချေ၏အခြားပုံစံများကိုမရောက်မီပထမဦးဆုံးကိုသုံးပါ။
သင့်ရဲ့လေးဂဏန်း PIN ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အဆိုပါကဒ်ကိုစာဖတ်သူကဒ်အပေါ်ချိန်ခွင်လျှာကနေ WIC ဝယ်ယူ deducting ရှေ့တော်၌ထို WIC အစားအစာများကိုအတည်ပြုရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်နှင့်ဝယ်သည့်အစားအစာများကိုအတည်ပြုသည်။
မဆိုကျန်ရှိသောလက်ကျန်ငွေငွေသား, EBT သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်ကလက်ခံပေးချေမှုတခြားပုံစံတွေနဲ့ paid နိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ကဒ်နှင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုယူပါ။ သင်၏ပြေစာသငျသညျဝယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကသင်၏ eWIC ကဒ်ပေါ်မှာကျန်ကြွင်းသောအဘယ်အရာကိုပြသသည်။
WIC အစားအစာများအကျိုးအတွက်တစ်လစတင်များနှင့်အဆုံးသည့်ရက်စွဲအကြားကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မဆိုအသုံးမပြုတဲ့အကြိုးကြေးဇူးမြားအကျိုးအတွက်တစ်လအဆုံးနေ့စွဲအပေါ်သန်းခေါင်မှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
နယူးဟမ်းရှား WIC အစားအသောက်စာရင်း Approved
ငါ၏အ PIN နံပါတ်အကြောင်း
PIN ကိုသင်သည်သင်၏ eWIC ကဒ်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုမယ့်လေးဂဏန်းလျှို့ဝှက်ကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ PIN ကိုရွေးချယ်ခြင်းအခါ, လေးယောက်ကိုသင်မှတ်မိဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်များ, ဒါပေမယ့်အထဲကပုံမှတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်ခက်ခဲကိုရွေးချယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်မည်သို့ PIN ကိုလုံခြုံစောင့်ရှောက်သလဲ?
သင့်ရဲ့ကဒ်ပေါ်တွင်သင်၏ PIN ကိုမရေးပါ။
သင်သည်သင်၏ကဒ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးကြောင်းမည်သူမဆိုရန်သင့် PIN ကိုမပေးပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ PIN ကိုသိတယ်နှင့်သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအစားအသောက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရန်သင့်ကဒ်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကထိုအကျိုးကျေးဇူးများကိုအစားထိုးပေးမည်မဟုတ်ပါ။
ငါသည်ငါ့ PIN နံပါတ်မေ့လျော့ခြင်းသို့မဟုတ် PIN ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုလျှင်အဘယ်သို့နည်း,
သစ်တစ်ခု PIN ကိုရွေးချယ်ဖို့သင့်ရဲ့ကဒ်၏နောက်ကျောပေါ်မှာတည်ရှိဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအရေအတွက်အားခေါ်ဆိုပါ။ သငျသညျအဓိကကတ်ကိုင်ဆောင်သူများမွေးဖွား၏ဇစ်ကုဒ်နှင့်ရက်စွဲလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သို့ငါစတိုးဆိုင်မှာမှားယွင်းတဲ့ PIN နံပါတ်ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်?
သင်သည်သင်၏မှန်ကန်သော PIN နံပါတ်ရိုက်ထည့်မှလေးခုအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိသည်။ မှန်ကန်သော PIN ကိုစတုတ္ထပါအပေါ်ထဲသို့ဝင်မပါရှိဘူးဆိုရင်, သင့် eWIC ကဒ်သော့ခတ်ခြင်းနှင့်သန်းခေါင်မှာ reset လိမ့်မည်။ သုံးမအောင်မြင်ကြိုးစားမှုပြီးနောက်, သင့် PIN ကို reset နှင့်သင့်ကဒ်သော့ခတ်ရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုခေါ်ပါ။
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်ပျောက်ဆုံးသွားအခိုးခံရခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီး အကယ်. သင်သည် "ဟုအဆိုပါနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဒေသခံ WIC ရုံးကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်တစ်ဦး WIC ရုံးကိုရှာပါ"ခလုတ်ကိုမှာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပဌနာ 1-855-279-0680, ဒါမှမဟုတ်မှာပြည်နယ် WIC ရုံးကိုပဌနာ 1-800-942-4321.